Donald Trump oo afhayeen 'isu noqday'! - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka SAUL LOEB/GETTY IMAGES
Image caption Afhayeenkii Aqalka Cad ayaa xilka ka dagtay
Laakiin arrinta xiisaha leh ayaa ah in aysan jirin cid lagu baddalay, ama la hadal hayo in shaqadaas lagu wareejinayo, waxaana la leeyahay "maba jiraan dad badan oo xiiso u qaba shaqadan aadka u adag".
Waxa uu sheegay wariyaheenna in Trump uu fahamsan yahay xikmadda ah "af jooga looma adeego", iyada oo bilihii ugu dambeeyay aysan Sarah Sanders qabanin wax shir jaraa'id ah, kaliyana ay saxaafadda uga jawaabaysay qoraallada uu Trump soo dhigo boggiisa Twitter-ka.
Image caption Sarah ayaa xilka heysay tan iyo sanadkii 2017-kii
Waxa uu aad wax ugu qoraa boggiisa twitter-ka, halkaas oo ay dadka iyo warbaahintaba kala socdaan sida uu fikirkiisa yahay, wuxuuna marar badan ku dhawaaqaa go'aanno waaweyn oo lama filaan ah.
Image caption Sarah ayaa lagu eedeeyay inay been u sheegtay warbaahinta
Markii ugu dambeysay ee ay Sarah shir jaraa'id warbaahinta u qabatay waxay ahayd 11-kii bishii Maarso, oo ku beegan 94 maalmood ka hor.
Bishii May ee sanadkii 2017-kii, ka dib markii uu Mr Trump shaqada ka eryay agaasimihii FBI-da James Comey, waxay sheegtay "inay shaqaale badan oo FBI-da ka tirsan ka maqashay inay ku farxsan yihiin go'aanka madaxweynaha, ugana mahad celinayaan".
Laakiin garyaqaan Robert Mueller, oo baarayay eedeymaha ku saabsan in kooxdii ol'olaha ee Trump ay ku lug lahaayeen Ruushka, waxay u sheegtay in hadalkaas ku saabsan FBI-da uu ahaa mid uu afkeeda ka xaday, "oo aan sal iyo raad toona lahayn".
Mrs Sanders ayaa ahayd dadka faro ku tiriska ah ee ka tirsanaa ol'olihii Trump, ee xilalka ka hayay maamulka Aqalka Cad.